ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေ၌ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်နေထိုင်၍ အလုပ် . လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ၃ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ . စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းကို ဖြေလျော့ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။ . - MitrThai.com
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေ၌ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်နေထိုင်၍ အလုပ် . လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ၃ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ . စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းကို ဖြေလျော့ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။ .
26 August 2021 26 August 2021 system ข่าวสาร, ประกาศ